Shir lagaga Hadlayo Kor U Qaadida Awooda Baarlamaanka Somaliland Oo Ka Socda Nairobi | Berberatoday.com
Shir lagaga Hadlayo Kor U Qaadida Awooda Baarlamaanka Somaliland Oo Ka Socda Nairobi
Hargeysa(Berberatoday.com)-Xubno ka tirsan Baarlamaanka Somaliland ayaa ka qayb galay shir lagaga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa awooda wacyi galineed ee dhinaca amniga oo ka dhacay magaalada Nairobi.
Xildhibaanada ka tirsan guurtida iyo wakiilada oo uu horkacayo guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiye ku xigeenka Guurtidu waxaa ay la shirayaan madaxda qaramada midoobay ee ku sugan Kenya.
Shirka waxaa lagaga wada hadlayaa sidii qaramada midoobay baarlamaanka Somaliland u siin lahayd tababaro kor loogu qaadayo wacyigalinta dhinaca Amniga ee baarlamaanka, tayaynta shaqaalaha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa awooda baarlamaanka Somaliland.
“Halkan waxaa ku dhan baarlamaankii Somaliland labada aqalba waxaa shirkan aanu kaga wada hadli doonaa iskaashiga ka dhaxeeya baarlamaanka Somaliland iyo qaramada midoobay, gaar ahaan tababarada kor u qaadida baarlamaanka amniga Somaliland ”ayuu yidhi guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro oo hogaaminayay Waftigan.
Shirkani waxaa uu soconayaa maanta iyadoo la filayo inay kasoo baxaan qodobo lagu taageerayo ama kor loogu qaadayo tayada iyo awood baarlamaanka Somaliland.
Xildhibaanada waftiga waxaa ka mid Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro, Guddoomiye ku xigeenka golaha Guurtida Jaamac, Guddoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Cali Yuusuf Axmed iyo Xoghayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirisaaq Siciid Ayaanle.